Inkqubo yokusebenza ye-IOS | IPhone iindaba
iOS yinkqubo yokusebenza ezisa izixhobo ezinje nge-iPhone, i-iPad, iPod Touch okanye iApple TV ebomini. Lakhe Ukulula kunye nokwenza kakuhle ziintsika zayo ukuze izigidi zabasebenzisi zikhethe i-iOS endaweni yokukhetha amanye amaqonga afuna izixhobo ezingaphezulu zokuhambisa inkqubo ngokutyibilikayo. Qho ngonyaka, iApple ikhupha uhlaziyo olukhulu lwe-iOS oko kuhlala kuzisa amanqaku awodwa ezona zixhobo zinqabileyo zithengiswayo ngelo xesha.
por ULuis Padilla yenzayo 1 iyure .
Xa abaninzi bethu sele begqibezela uhlaziyo olukhulu lwe-iOS 15, ngaphantsi kwenyanga ngaphambi kweWWDC...
I-iOS 16 ye-beta yoluntu inokulibaziseka ngenxa yemicimbi yozinzo
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iiyure ze9 .
I-WWDC ikufutshane nekona kwaye iya kuba kwinqaku eliphambili lokuvula xa uTim Cook kunye…
Uhlaziyo! iOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 kunye netvOS 15.5 ilungele ukukhutshelwa
por ULuis Padilla yenzayo Iintsuku ze2 .
Emva kweeveki zokulinda ngeenguqulelo zeBeta ze-iOs 15.5, uhlaziyo olutsha (kwaye mhlawumbi lokugqibela)…
UGurman uqikelela ukubandakanyeka ngakumbi kunye neeapps ezintsha kwi-iOS 16
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iintsuku ze2 .
Kusele iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba i-WWDC22, owona msitho mkhulu wonyaka kubaphuhlisi be-Apple, iqale. Kwi...
Uzisebenzisa njani iiReactions kuWhatsApp
I-WhatsApp sele isungule umsebenzi wayo omtsha okuvumela ukuba usabele kwimiyalezo ethunyelwa kuwe ngaphandle kokubhala ...
I-iOS 16 iya kuzisa amanqaku abucala ngakumbi ngokwandisa i-iCloud Private Relay
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iiveki ze3 .
I-iOS 16 ifikeleleka kuko konke ukuvuza kunye namahemuhemu kwiiveki zamva nje. Kukho kancinci nangaphantsi…
I-iOS 15.5 beta ivimba iinkumbulo zeefoto ezithathwe kwiindawo "ezinobuzaza".
por UToni Cortés yenzayo Iiveki ze3 .
I-Apple isandula ukwenza uhlengahlengiso olutsha olufunyenwe kwi-beta ye-iOS 15.5 kwaye inoku…
Lo mbono ubonisa ukuba usetyenziso lweMozulu luya kujongeka njani kwi-iPadOS
I-iPadOS yafika njengenkqubo yayo yokusebenza ye-iPad kwiminyaka embalwa eyadlulayo. Nangona kunjalo, kude kube ngoko, i-iOS yayiziqhelanisa…
iOS 2 Beta 15.5 Ngoku Iyafumaneka
por ULuis Padilla yenzayo Iiveki ze4 .
I-Apple isandula ukukhulula ibhetshi yayo entsha yeBeta kuzo zonke izixhobo zayo, kubandakanya iOS 15.5 Beta 2, watchOS 8.6...
Uyilawula njani isimboli yendawo evela kwi-iPhone yakho
por UAlex Vicente yenzayo Iiveki ze4 .
Ngokuqinisekileyo ubonile ukuba isimboli yendawo ibonakala ngamaxesha ngamaxesha phezulu kwi-iPhone yakho, ...
Le yinto yonke esicinga ukuba siyazi malunga ne-iOS 16 ukuza kuthi ga ngoku
I-Apple yavula ukuvalwa kwamahemuhemu malunga nenkqubo yayo entsha yokusebenza ngexesha iqinisekisa…
Ungayicima njani i-iPhone yam
IOS 11 itshintsha ukusebenza kweWiFi kunye neBluetooth
Uwuqalisa njani umsebenzi we-AirDrop kwi-iOS 11 kwi-iPhone nakwi-iPad
Ngaba unengxaki kwi-WiFi kwi-iPhone? Zama ezi zisombululo
Khuphela iifoto ezintsha ze-iOS 11 kunye neMacOS ePhakamileyo yeSierra
Ungawaskena njani amaxwebhu kwi-iOS 11 nge-app yeeNqaku
Yazisa iminxeba okanye indlela yokwenza i-iPhone yakho ikuxelele ukuba ngubani okubizayo
IOS 10 yokukhuphela amakhonkco
Iindlela zokugcina idatha kwi-iPhone nge-iOS 10
Ngaba i-iOS 10 ingafakwa kwi-iPhone 4s? Kwaye kwi-iPhone 5?
IOS 9 yokukhuphela amakhonkco
Sihlalutya i-iPod Touch 6G entsha ngokweenkcukacha
Ukujonga ukuba yeyiphi i-firmware etyikitywa ngu-Apple
Ungazicima njani ngokusisigxina iifoto zakho kwi-iPhone nakwi-iCloud
Amakhonkco okukhuphela ngokuthe ngqo i-iOS 8.1
Uyenza njani kwaye ufumane iifowuni ezivela kwi-iPad yakho nge-iOS 8
Qhagamshela kwi-iOS 8.0 yokukhuphela ngokuthe ngqo